RX588 gpu miner nwere ike mgbako nke 240MHs
1. Miner case na-eji B85 chipset na kewaa motherboard.
2. Igwe Ngwuputa eth na-eji kaadị 8 RX588 na-egwuputa ihe, ike mkpokọta nke igwe dum nwere ike iru 240MH / s.
3. Ihe ngwungwu nke na-egwuputa ihe nwere ihe nkwụnye ọkụ 1800W wuru, nke dị mma iji jikwaa na ịchekwa ohere.
4. Rig Miner na-eji bọọdụ shunt ike na-eme ka kaadị eserese 8 RX588 dị iche iche, na-ebelata oke motherboard, na-eme ka kaadị eserese na-arụ ọrụ kwụsie ike na ogologo ndụ.
5. TopMiner A1 na-eji a n'ihu na azụ dual-ahiri fan okpomọkụ dissipation okirikiri nhọrọ ukwuu, otu n'ime na otu nke dual-channel okpomọkụ dissipation, na-eji 8 Fan (DN12cm) 3500RPM elu-ọsọ fan, ndụ ọrụ bụ 50,000 awa, na ugbu a dị ka 0.48A, na ndụ ọrụ dị ogologo.
6. Mining rig Chassis nwere 65mm ultra-wide graphics card spacing, adabara maka ọtụtụ ndịna-emeputa kaadị, mfe dochie.
7. A na-eji chassis nke igwe na-egwuputa ihe na-eme ka efere ígwè na-acha oyi na-acha oyi na-acha na ọkpụrụkpụ nke 1mm na ezigbo mma.
1. Kedu ka esi ebupu igwe Ngwuputa a?
Ebe ọ bụ na chassis nke mining rig na kaadị eserese dị arọ karị, ọ bụrụ na ị nye iwu prototype ule, anyị ga-akpakọ ma bupu chassis nke Ngwuputa chassis na kaadị eserese iche iche.Ọ bụrụ na ị na-enye iwu na nnukwu, anyị ga-eji ntinye kaadị kaadị.Ngwuputa chassis ga-etinye kaadị eserese ahụ.
2. Ọ bụrụ na m zụta igwe a, enwere m ike ịgbanwe kaadị eserese ndị ọzọ?
Ee, ị nwere ike ịgbanwe gaa na kaadị eserese ndị ọzọ.Oghere oghere nke igwe a bụ 65mm, ogologo kaadị akwadoro bụ 295mm.Tupu ị kpebie ịgbanwe, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ anyị.
3. Enwere m ike ịhọrọ ihe nkwụnye ọkụ nwere ike dị elu?
Ee, ọ bụ nhọrọ, biko kpọtụrụ ndị ọrụ anyị.
Nke gara aga: 1600W ike ọkọnọ maka gpu miners
Osote: Igwe na-egwuputa ihe na-eji kaadị eserese 8 65mm pitch
Kaadị eserese: RX 588 8GB DDR5
Oriri ike: 1150W
Ncheta: Kaadị eserese nke nwere igwe 8 gpu eth a nwere ike iji naanị ego ezoro ezo, ọ dabara na kọmpụta ụlọ.